भर्खरै आँचलसंग बिहे गरेका उदिपलाई झड्का: फिलिपिनी पुर्व प्रेमिका र बच्चासहितको तस्विर बाहिरियो ! (भिडियो हेर्नुस्) - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
भर्खरै आँचलसंग बिहे गरेका उदिपलाई झड्का: फिलिपिनी पुर्व प्रेमिका र बच्चासहितको तस्विर बाहिरियो ! (भिडियो हेर्नुस्)
. सलमान खानसँग श्रीमान उदीपको तुलनाले नायिका आँचल मख्ख
. स्वस्तिमा पछि तेलुगु फिल्म ‘हिटम्यान’मा आँचलको इन्ट्री
. बिहेपछि झनै बोल्ड बनेकी आँचल दशैं भ्याकेसन मनाउन उदिपसँग दुबईमा
. ‘बेरुवाको औंठी’मा प्रकाश र आँचलको रोमान्स ( भिडिओ )
. मेलम्चीसँगै धेरैको सपना पनि बग्यो भन्दै सहयोगमा जुटिन आँचल
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: मङ्गलवार, माघ २५ २०७८ २२:२५:४८